Khabiirka Sky Sport Ee Guillem Balague Oo Saadaaliyay Kulanka UCL Ee Man City vs Liverpool %
Kooxaha Manchester City iyo Liverpool, ayaa waxay isku wajihi doonaa wareega Sideed dhamaadka tartanka Champions League, kadib markii ay isku aadeen wareegaan, iyadoona uu yahay kulanka ugu xiisaha badan ee wareega laga dheeli doono.
Sikastaba, khabiirka Shabakada Sky Sport, ninka lagu magacaabo Guillem Balague, oo ka hadlaya kulankaan wuxuu sheegay in naadiga Man City ay tahay mida ugu fiican Yurub, sidaas darteeda kooxda Klopp nagaha laga soo tumi doono.
“Alle wuxuu yahay kulan. Horyaalka waxaa kaliya udhaxeeya dhibcooyin kooban, waxayna nasoo xasuusiyeen Chelsea-Liverpool sida sanadkii 2004-05, sidaas darteeda wuxuu noqon doonaa kulan aad u xiiso badan,” ayuu ku bilaabay hadalkiisa.
“Man City waxay ku jirtaa muuqaal ciyaareed fiican, waxayna tahay midka ugu fiican Yurub, laakiin Klopp waa midka ugu badan ee garaacay Pep Guardiola in ka badan macalimiinta kale,” ayuu hadalkiisa ku daray ninkaan reer Spain.
“Dad badan waxay dhahayeen Man City ayaa ugu cad-cad guusha, laakiin waxaan dareemayaa in Pep uu tix-gelinayo xaqiiqadaha in kulan ay khasaareen 52 kulan oo ay ka dheeleen Yurub, taasi waa horumar,” ayuu sii daba dhigay.
“Inaad ka hortegto Liverpool, waxay tahay mid aad loogu khamaari karo, maxaa yeelay waxay haystaan weerar yahano fician, marka waan arki doonaa sida ay Man City wax yeesho iyo waxa kasoo baxa kulankooda koowaad,” ayuu xusay.
“Aniga ahaan waxaan siin lahaa Man City faa’idada ugu badan, maxaa yeelay waxay muujiyaan xagaagan awoodooda iyo in daafacooda uu xoogan yahay, laakiin waxaa jiri doona kuwa kulankaan seegi doona,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Champions LeagueGuillem BalagueMan City vs Liverpool